घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » गेस्टपोस्ट » सबैभन्दा लोकप्रिय गोल्फ कोर्स/अमेरिका मा रिसोर्ट्स
अमेरिका सधैं गल्फ को शौकीन भएको छ। जे होस् खेल ब्रिटेन मा उत्पन्न भयो, अमेरिका मा विश्व को गोल्फ सुविधाहरु को ४५% छ र प्रमुख च्याम्पियनशिप को धेरै होस्ट गर्दछ।
एक अचम्मलाग्दो 36.9 लाख अमेरिकीहरु २०२० मा मात्र गल्फ खेले।
यो सानो आश्चर्य छ कि यो देश यति धेरै गोल्फ किंवदंतियों को घर हो।
उडान तुलना वेबसाइट द्वारा आयोजित अनुसन्धान को आधार मा एक सस्तो उडान खोज्नुहोस्, हामी सबैभन्दा लोकप्रिय गोल्फ कोर्स र अमेरिका मा रिसोर्ट्स को एक सूची संकलित गरेका छौं।
यो गाइड तपाइँ संसार मा सबैभन्दा अनन्य गोल्फ क्लबहरु मध्ये केहि मा एक अन्तरदृष्टि दिनेछ। लिमोसिन एस्कॉर्ट्स बाट $ २,५०,००० सदस्यता शुल्क, त्यहाँ गल्फ को खेल को तुलना मा यी क्लबहरु लाई धेरै धेरै छ।
सबैभन्दा लोकप्रिय गोल्फ कोर्स र अमेरिका मा रिसोर्ट्स
धेरै लोकप्रिय गोल्फ कोर्स र अमेरिका मा रिसोर्ट्स को धेरै ५० बर्ष पहिले गठन गरीएको थियो। हलिउड कुलीन र शक्तिशाली राजनीतिज्ञहरु दुबै कोर्सहरुमा र बाहिर काँधहरु मसालेका छन्, यद्यपि जो जान्दछन् कि उनीहरु खेल को समयमा के बारे मा कुरा गर्छन्!
अमेरिका मा सबैभन्दा लोकप्रिय गल्फ कोर्स को केहि क्यालिफोर्निया मा रिवेरा कन्ट्री क्लब, नेभाडा मा छाया क्रीक र न्यू जर्सी मा पाइन घाटी गोल्फ क्लब शामिल छन्।
पढ्न को लागी पत्ता लगाउन को लागी कुन गोल्फ कोर्स र रिसोर्ट्स अमेरिका मा 'सबैभन्दा लोकप्रिय' सूची बनाएको छ।
सीटी स्ट्रेट्स अमेरिकन क्लब संग सम्बन्धित दुई पाठ्यक्रमहरु मध्ये एक हो। यो ३ 36 होल लिंक शैली मा झील मिशिगन तटरेखा को दुई माईल संगै चल्छ। पाठ्यक्रम आफैं 6,757m हो र विवाहित जोडी, पीट र एलिस डाई द्वारा डिजाइन गरीएको थियो।
यो कोर्स खेल्न को लागी एक उत्कृष्ट कृति हो। यो २०२१ मा ४३ औं राइडर कप को मेजबानी गर्न को लागी सेट गरीएको छ र च्याम्पियनहरु लाई आफ्नो सीमा सम्म। यो पहिले धेरै होस्ट गरेको छ पीजीए च्याम्पियनशिप र यूएस सीनियर ओपन।
तपाइँ आफैंलाई एक गोल्फ प्याकेज को लागी पुरा तरिकाले कोर्स को अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। एक लोकप्रिय प्याकेज को लागी डाई को लागी हो, जसमा तीन रात को बास, चार १-होल खेल र ३० मिनेट को गोल्फ पाठ शामिल छ।
विस्कॉन्सिन मा आधारित हुँदाहुँदै, पाठ्यक्रम एक देहाती आयरिश फार्महाउस सेटिंग को याद दिलाउँछ। त्यहाँ धेरै रेस्टुरेन्टहरु छन् कि तपाइँ गोल्फ को एक व्यस्त दिन पछि मा खाना गर्न सक्नुहुन्छ। बेलायती प्रभावित मेनूहरु चिपचिपा टफी हलवा र भेडा को रैक जस्तै हस्ताक्षर व्यंजन सुविधा।
अगस्टा नेश्नल गल्फ क्लब
अगस्टा, जर्जिया मा आधारित, यो क्लब १ 1930 ३० को दशक मा खोलिएको थियो। यो संयुक्त राज्य अमेरिका मा सबैभन्दा अनन्य क्लबहरु मध्ये एक हो किनकि यो केवल सदस्यहरु र आमन्त्रित मात्र पाहुनाहरु को लागी खुला छ।
धेरै जसो मानिसहरु अगस्टा क्लब संग उनीहरुको टेलिभिजन स्क्रिनहरुमा प्रत्येक अप्रिल देखी परिचित हुनेछन्। मास्टर टूर्नामेंट कोर्स मा होस्ट गरिएको छ जब बाट यो 1934 मा बबी जोन्स द्वारा बनाईएको थियो।
कोर्स १--होल, बराबर 18२ हो। यो शौकिया च्याम्पियन, बबी जोन्स र वास्तुकार, एलिस्टर म्याकेन्जी द्वारा डिजाइन गरीएको थियो। यो जोडी एक शक्तिशाली जोडा साबित भयो र परिणाम एक अमेरिकी गोल्फ कोर्स को सफा र खुला विस्तार को एक आदर्श उदाहरण हो।
कुल पाठ्यक्रम लम्बाई 7,475 यार्ड छ। प्रत्येक प्वाल बिरुवाहरु को नाम पछि राखिएको छ किनकि साइट पहिले एक बिरुवा नर्सरी थियो। पहिलो प्वाल चिया जैतून भनिन्छ, फूलहरु केकडा एप्पल (चौथो) र क्यारोलिना चेरी (1th) सहित अन्य नामहरु संग।
Kiawah टापु गोल्फ रिजोर्ट
Kiawah टापु गोल्फ रिसोर्ट २०२० मा विश्व (द ओशन कोर्स) मा शीर्ष १०० कोर्स मा क्रमबद्ध गरिएको थियो। यसले २०२१ मा PGA च्याम्पियनशिप को मेजबानी पनि गर्‍यो, जुन चार प्रमुख च्याम्पियनशिप मध्ये एक मात्र हो जुन विशेष गरी पेशेवर गोल्फरहरु को लागी आयोजित गरीन्छ।
त्यहाँ Kiawah द्वीप मा पाँच पाठ्यक्रमहरु छन्: महासागर कोर्स, Osprey बिन्दु, ओक बिन्दु, कछुवा बिन्दु र कौगर बिन्दु। प्रत्येक पाठ्यक्रम १-होल, par२ बराबर छ। अटलांटिक नजिक दस प्वाल र अर्को आठ सीधा विपरीत संग, महासागर कोर्स उत्तरी गोलार्द्ध मा सबैभन्दा समुद्री किनार छेद छ। यो एक विशेष रूप बाट हावा को पाठ्यक्रम को लागी पाठ्यक्रम को चुनौती मा जोड्दछ।
दक्षिण क्यारोलिनियन गोल्फ रिसोर्ट १४ रेस्टुरेन्ट, बार र क्याफेहरु, सागर कोठा र जैस्मीन पोर्च सहित समेटेको छ। तपाइँ पाँच तारा स्पा र सैलून मा डाउनटाइम बिताउन सक्नुहुन्छ र अभयारण्य होटल, रिसोर्ट भिला वा एक निजी कुटीर मा रहन सक्नुहुन्छ।
रिभिएरा कन्ट्री क्लब
प्रशान्त Palisades, क्यालिफोर्निया मा स्थित, रिवेरा कन्ट्री क्लब लगभग एक शताब्दी को लागी खुला छ। पाठ्यक्रम नियमित रूप मा लस एन्जलस ओपन होस्ट गर्दछ र २०२2028 ओलम्पिक मा गोल्फ प्रतियोगिताहरु को मेजबानी को लागी तयारी गरीरहेको छ।
यस सूची मा धेरै अन्य क्लबहरु को समान, रिवेरा देश क्लब सदस्यहरु को लागी मात्र हो। अघिल्लो सदस्यहरु मा वाल्ट डिज्नी र डीन मार्टिन शामिल छन्। यो सानो आश्चर्य छ कि कुलीन मात्र यस अनन्य क्लब को पहुँच संगै मात्र हो - सदस्यता वरपर लागत अफवाह छ $ 250,000!
१--होल कोर्समा कुकुया घाँस जस्ता विशेष सुविधाहरु छन्, जो अफ्रिका बाट एक महत्वपूर्ण घाँस हो। क्लब मा एक टेनिस क्लब पनि सामेल छ यदि तपाइँ फेन्सी अर्को खेल मा जान को लागी। यदि तपाइँ एक सदस्य द्वारा क्लब मा खेल्न को लागी आमन्त्रित गर्न को लागी भाग्यशाली हुनुहुन्छ भने तपाइँ 18 नियुक्त अतिथि सुइट मध्ये एक मा रहन सक्नुहुन्छ।
पाइन उपत्यका गोल्फ क्लब
पाइन घाटी गोल्फ क्लब दक्षिणी न्यू जर्सी मा 1919 मा खोलिएको थियो। यो पछि बाट संसारको सबैभन्दा कठिन पाठ्यक्रमहरु मध्ये एक को रूप मा जानिन्छ, साथ साथै सबैभन्दा विशेष को एक को रूप मा परिचित भएको छ।
जब सम्म तपाइँ एक सदस्य द्वारा पाठ्यक्रम भ्रमण को लागी आमन्त्रित हुनुहुन्न, यो संभावना छैन कि तपाइँ एक सदस्य को रूप मा यो कोर्स खेल्न पाउनुहुनेछ। त्यहाँ संसारभरि लगभग 930 सदस्यहरु को बारे मा अफवाह छन्, यद्यपि सूची एक नजिकबाट संरक्षित गोप्य छ। अन्य क्लबहरु कि एक सदस्य आवेदन प्रक्रिया को प्रस्ताव को विपरीत, पाइन घाटी गोल्फ क्लब मा निर्देशक को बोर्ड संभावित नयाँ सदस्यहरु लाई दृष्टिकोण।
२०२१ ले क्लब मा एक ठूलो परिवर्तन देखेको छ - महिलाहरु अब सदस्य को रूप मा सामेल हुन सक्छन् र अप्रतिबंधित खेल को आनन्द उठाउन सक्छन्। विगतका वर्षहरुमा महिलाहरुलाई आइतबार दिउँसो मात्र पाहुनाको रुपमा खेल्न दिइन्थ्यो। सेप्टेम्बर पनि पाइन उपत्यका को वार्षिक क्रम्प कप होस्ट देख्छ, त्यसैले क्लब को संस्थापक को नाम पछि। क्रम्प कप को दिन मात्र जनता को सदस्यहरु क्लब को मैदान मा अनुमति छ।
अन्य कहाँ यो लिमोसिन को माध्यम बाट गोल्फ कोर्स मा पुग्न अनिवार्य छ? छाया क्रीक चीजहरु फरक तरीकाले गर्न मनपर्छ र यो quirk मात्र यसको आकर्षण को हिस्सा हो। पाहुनाहरु लास भेगास मा एक एमजीएम होटल मा रहन को लागी केहि २० देखि ३० मिनेट को दूरी मा गोल्फ कोर्स मा खेल्न को लागी सक्षम हुनु पर्छ।
छाया क्रीक १ 1989aमा एक निजी क्लब को रूप मा शुरू भयो, तर यो लगभग २० बर्ष पहिले सार्वजनिक भयो। टम Fazio पहाड को एक दृश्य संग, रेगिस्तानी परिवेश को बीच एक ओएसिस मा १ hole-होल कोर्स डिजाइन।
कोर्स २०२० मा PGA टूर को CJ कप को मेजबानी गरीयो र २०१ M मा The Match: Tiger vs. Phil (Tiger Woods vs. Phil Mickelson) को मेजबानी पनि गर्यो।
Oakmont कन्ट्री क्लब
तपाइँ देश मा सबैभन्दा पुरानो गोल्फ कोर्स मध्ये एक मा कक्षा र सुन्दर दृश्यहरु को आशा गर्न सक्नुहुन्छ। Oakmont कन्ट्री क्लब १ 1903 ०३ मा स्थापित भएको थियो र यसको वरिपरि सबैभन्दा कठिन पाठ्यक्रमहरु मध्ये एक को आफ्नो प्रतिष्ठा राखेको छ।
छिटो साग र १175५ गहिरो बंकर (कुख्यात चर्च प्यू सहित) यो पेंसिल्वेनिया को पाठ्यक्रम पनि सबैभन्दा अनुभवी गोल्फर को लागी एक चुनौती बनाउँछ। यदि तपाइँ व्यक्तिगत रूप मा एक अतिथि को रूप मा क्लब मा भाग लिन को लागी आमन्त्रित गरीरहनु भएको छ वा वास्तव मा एक सदस्य आफैं बन्नु हुन्छ भने तपाइँ मात्र एक जाने को लागी सक्षम हुनुहुनेछ।
क्लबले धेरै विवाह र कर्पोरेट कार्यक्रमहरु लाई आफ्नो धेरै समारोह कोठा मा होस्ट गर्दछ। परिष्कृत Ballroom मा तपाइँको घटना होस्ट, वा एक शान्त र अधिक घनिष्ठ घटना को लागी लाइब्रेरी छान्नुहोस्।
ब्यान्डन टिब्बा गोल्फ रिसोर्ट
ब्यान्डन टिब्बा गोल्फ रिसोर्ट मा छ वटा फरक पाठ्यक्रमहरु छन्। तपाइँ प्रशस्त महासागर लाई हेरेर एक लिंक कोर्स मा खेल को आनन्द उठाउन सक्नुहुन्छ। ब्यान्डन संरक्षण एक १३-प्वाल कोर्स हो कि एक धेरै राम्रो खेल को तुलना मा धेरै छ। पाठ्यक्रम बाट सबै आय जंगली नदी कोस्ट एलायन्स, जो संरक्षण, समुदाय र स्थानीय अर्थव्यवस्था को समर्थन मा जाने।
तपाइँ भोकाउनु हुन्न किनकि त्यहाँ सात रेस्टुरेन्ट र बारहरु छनौट गर्न को लागी छन्। प्रशान्त ग्रिल मा स्थानीय प्रशान्त उत्तर पश्चिमी भोजन, वा McKee's पब मा परम्परागत स्कटिश शैली खाना कोसिस गर्नुहोस्।
Inn मा एउटा कोठा छनौट गरेर तपाइँको आफ्नै कोठा को आराम मा गोल्फ कोर्स को आनन्द लिनुहोस्। यहाँ, तपाइँ तपाइँको विन्डो को बाहिर को पाठ्यक्रम को एक निर्बाध दृश्य हेर्न को लागी सक्षम हुनुहुनेछ। वैकल्पिक रूपमा, तपाइँ लिली पोखरी मा रहन छनौट गर्न सक्नुहुन्छ, जहाँ तपाइँ आफ्नो निजी डेक जंगल अनदेखी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ छवटा आवास संग छनौट गर्न को लागी धेरै छनौट छ।
Muirfield गाउँ गोल्फ क्लब
Muirfield गाउँ एक ठूलो प्रतिष्ठा पछ्याउन को लागी यसको नाम संसारको सबैभन्दा पुरानो गोल्फ कोर्स को घर हो। ज्याक निक्लस प्रसिद्ध कोर्स को सम्मान गर्न चाहन्थे जब उनले 1974 मा आफ्नै डिजाइन गरे।
डबलिन, ओहियो स्कटल्याण्ड बाट एक लामो बाटो हो, तर पाठ्यक्रम यसको विरासत को लागी सही रहन्छ। 220 एकड मा स्थित, सदस्यहरु र उनीहरुका पाहुनाहरु धेरै पानी को खतरा, बंकर र साँघुरो fairways संग एक कोर्स मा खेल्न सक्छन्।
निक्लॉस नियमित रूप मा पाठ्यक्रम को उन्नयन को पर्यवेक्षण गर्दछ ताकि क्लब परिवर्तन टेक्नोलोजी र वास्तुकला को प्रगति संग रहन्छ। २०२० कोर्स मा एक प्रमुख पुनर्निर्माण देखीयो र धेरै प्वाल अपग्रेड गरियो।
त्यहाँ क्लब मा भोजन को लागी चार ठाउँहरु छन्, परिवार को अनुकूल गोल्डन भालू कोठा सहित, जो एक डबल पक्षीय फायरप्लेस सुविधाहरु।
2009 मा स्थापित, Muirfield गाउँ फाउण्डेशन मा कन्ट्री क्लब पनि ओहियो मा विशेष आवश्यकताहरु संग बच्चाहरु लाई मद्दत गर्दछ। जब देखि यो गठन भएको थियो, फाउन्डेसन विभिन्न दान को लागी $ 250,000 बाट सम्मानित गरीएको छ।